In ka badan 350 oo arday ah oo iska ga baxay dugsiyada ku xidhan fatxullah Gulen ee kuyaala dalka Danmark - Horn Future
In ka badan 350 oo arday ah oo iska ga baxay dugsiyada ku xidhan fatxullah Gulen ee kuyaala dalka Danmark
COPENHAGEN, (AA)-In ka badan 350 oo arday ah ayaa waxa ay iska ga baxeen dugsiyada ku xidhan fatxullah Gulen ee Danmark kadib afgambigii 15 July laga adkaaday ee dalka Turkey,kaasoo lagu eedeeyay ururka argagixisada ah ee Fatxullah, sida ay sheegeen wararka warbaahinta maxaliga ah.
Sida laga soo xigtay TVga 2aad, tiro guud oo gaadheysa 366 oo dugsiyadan ku xidhan Fatxullah Gulen hore uga ahayd arday ayaa iyaku gabi ahaan aanan is-diwaan galin semester ka cusub ee sanad dugsiyeedkan.
Ururka Fatxullah Gulen ama loo soo gaabiyo FETO ayaa dugisyadiisa ka hawlgali jiray Denmark ay ahaayeen 7 dugsiyo oo hoose, 4 dugsiyo oo sare ah iyo 3 dugsiyada hooyga ah.
Televishankan ayaa sheegay in qaar ka mid ah dugsiyadan ku xidhan ururka Fatxullah ay durbaba seegeen tiro lagu qiyaasay 40% ardaydooda.
Dalka Romania ayaa sido kale lagu soo waramayaa in tobonaan arday ah ay ka baxeen dugsiyada ku xidhan ururka Fatxullah.
Madaxa IMM Turk oo ah urur Turkish ah, Nazmi Dogan ayaa u sheegay wakaaladda Anatolia in isaga laftigiisu uu ka saaray caruurtiisa dugsiyadan lagu xidhiidhinayo Fatxullah Gulen oo uu ku tilmaamay in uu yahay khaa’in.
Dugsiyadan lala xidhiidhinayo Fatxullah Gulen ayaa lagu eedeeyay in ardayda ay maskaxda ka maydhaan kuwaasoo mustaqbalka fog loo adeegsado in ay fuliyaan qorshayaasha ururkan sida afgambigii guul-daraystay oo kooxda ku kacday ay ahaayeen ardaydii wax ka baran jirtay dugsiyadan uu aasaasay Fatxullah Gulen.
Dowladda Turkey ayaa sheegtay in afgambigii laga guuleeystay 15 July ay ku shahiideen 240 qof halka 2,200 oo kalena ay ku dhaawacmeen,kaasoo ay soo abaabuleen kooxaha raacsan Fatxullah Gulen oo isagu si iskii ah isku soo rogay dibad-joog oo ku nool Maraykanka gaar ahaan Pennsylvania tan iyo 1999, iyo shabakadihiisa ku xidhan.
« Taliska Ethiopia oo diiday in uu qaabilo guddiga Qaramada Midoobay si ay u baadhaan dibadbaxyadii iyo orodyahan muujiyay sida uu u diidan yahay taliska	» Daadad sababay roobab xoog leh oo ka da’ay dalka Sudan oo waxyeello ballaadhan u gaystay dalaggii beeraha